चीनले किन सीमामा ठूलो संख्या सेना तैनाथ गरेको छ, बुझ्न सकिरहेका छैनौँ : जयशंकर - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका १४ भाद्र २०७७, 1:38 pm
हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा जयशंकरलाई ‘पूर्वी लद्दाखमा तनावको स्थिति कस्तो छ ?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा जयशंकरले भने, ‘हामी कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट चीनसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ । हाम्रो दृष्टिकोणमा दुई कुरा अनिवार्यरुपमा शामेल छ ।
एक, सन् १९९३ देखि हामीले समय–समयमा चीनसँग केही सम्झौता गर्दै आएका छौँ जसअनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दुवै पक्षले न्यूनतम बल तैनाथ राख्नुपर्छ । अहिले यो स्थिति छैन । किनभने चीनले ठूलो संख्यामा एलएसीमा सैना तैनाथ गरेको छ । हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ कि किन यस्तो भइरहेको छ ? स्पष्टरुपमा यदि हामी सीमामा शान्ति चाहन्छौँ भने हामीले ती सम्झौताहरुलाई पालना गर्नैपर्छ ।’
‘दुई देशमध्ये कसले स्थितिलाई सही ढंगले बुझ्न सकेको छैन ?,’ भन्ने प्रश्नमा जयशंकरले भने, ‘यहाँ कयौँ कुरालाई बुझ्नुपर्छ जसले ‘बिग पिक्चर’ लाई स्पष्ट गर्दछ ।
जस्तो चीनको उदय कसरी भयो र उसले विश्वलाई कुन नजरले हेर्दछ ? भारतको विकास कसरी भयो र आज हामी कहाँ छौँ ? साथै, अमेरिका जसको स्थान पछिल्लो दशकमा बदलिएको जसको भारत–चीन लगायत पूरा विश्वमा असर परेको छ ।
चीनले यो समयमा आफूलाई पूरै बदलेको छ भने भारतले धेरै उन्नति गरेको छ । चीनजस्तै भारतका पनि आफ्नै महत्वकांक्षाहरु छन् । त्यसैले हामीले मध्यमार्गीको बाटो पहिचान गर्न आवश्यक छ । हामीले एक अर्काको ध्यान राख्नुपर्छ र एक अर्काको लागि स्थान बनाउनुपर्छ । तर, हालमा जे भएको छ, त्यसलाई हेर्दा यो त्यति सजिलो छैन ।’